Akadzoka nhumbi kubva anotenga: vamwe nuances
Zvichida chimwe chezvinhu zvisingafadzi ezvinhu anotarisana nevanhu mutengesi panguva yaro basa, ndiko kudzoka nhumbi kubva mutengi. Nekurangarira kuti oparesheni ichi iri automatic panowanikwa yakawedzerwa nomusoro uye chitarisiko kuti chero kushanduka kuchengetera evoruzhinji. Zvinofanira kungwarira zvikurukuru Data kuti inoshandawo nzvimbo mutero ndizvidavirire. Zvisinei, upenyu haagumiri vadzoka, uye anoramba nehasha uye rinofadza.
Returns kubva mutengi: pezviitiko
Kana Kupfuudzwa oparesheni anotora nhumbi kubva mutengesi kusvikira anotenga, kuti chokwadi unoratidzwa mu chikuru gwaro, kureva muchimiro TORG-12. Saizvozvowo, pahwaro hwayo inofanira akapinda mune mashoko ari mutero chizvidavirire hurongwa. Kana wokudzorera nhumbi zvakadyiwa chinopinda kururamiswa inivhoyisi. Izvi zvinokosha gwaro nokuti inobva nokuchinja mutero munataisireva yomutero iri kukosha yakawedzerwa. Asi pane imwe "asi": exchange uye vakadzoka nhumbi dziri pamusoro zano zvinogoneka chete nyaya kana chinopfuudzwa nenzira yakakodzera. Handiti, mutemo wakadzikwa kuti iyi nyaya mutengesi rinoratidza sangano pakati zvokunyama kunze sezvo Implementation.
Kana zvinhu haagoni kunzi yepamusoro, vanoratidza zano siyanei. Mutengi anodzoka rakavapo vakatengwa zvekushandisa inivhoyisi, nekurangarira Mutengesi kudzokera Postings mu magwaro yapfuura uye ape kwokururamisa inivhoyisi.
Dzokera fuma mutengi chii chigadzirwa?
Kana mutengi kunopa chigadzirwa ari chitoro nzira yokubudisa nayo, inofanira kuva zvose zvisimbiso, zvisiri, uye zvimwe zvinhu zvakadaro. Chero zvazvingava, chitarisiko chake haafaniri kukonzera chero zvaaitaura. Zvikasadaro, kana mumiririri mutengesi anowana kuremara, aigona pemurairo vanoramba kudzoka.
Ndisu ruoko mutengi anofanira mari kana marketable gwaro iyo kunoratidza chokwadi kuti mutengapwe yapfuura.
Asi usakanganwa kuti pane chikamu uwandu zvinhu, izvo kundozivisa vakadzoka nhumbi kubva anotenga havazokwanisi, sezvo ivo pane zvemitemo pamwero haigoni vaipanana. Kazhinji kana munhu zvitoro kutenga pakarepo anyevera kwete kuti aizokwanisa kudzorera chigadzirwa.
Dzokera fuma mutengi: Posting
Kana paiva chokwadi pamusoro pakutengeswa kwenhumbi :
Akaratidza mari (kunyorwa consignment katsamba), DR 62 - KT 90-1.
Subtracted mutengo (. Boo bhuku) Ndiri 90-2 - 41 RM.
VAT unoratidzwa Movement (Boo bhuku.) DR 90-3 - 68 Km.
Zvinoratidza nerubatsiro mari iri kuitika nhoroondo (bhengi mashoko), DR 51 - 62 Km.
Kana paiva risiti shure kusvika yavakatengesa kare nengarava Party:
Kuratidza zvinhu chionekeso shure (The magwaro), Ar 41 - 60 Km.
Akagadzirisa chitsama VAT (mutengi magwaro) DR 19 - 60 Km.
Yakabudiswa nemisha (mushoma kana chiito netting), Ar 60 - Kr 51 (kana 62).
Repair dzimba mari yazvo
Zvemakore utariri basa rayo zvinokosha pfungwa
Ndechipi zvemari Grant rubatsiro. Financial rubatsiro yezvipo ne wendarama
Mukwikwidzi kuti "Imba-2" Ashmarina Alena kuti mapurasitiki
Meat pamwe Eggplant mu multivarka. kubika Recipes
Evanhu nyora rake rorudyi; zvinoreva uye mapikicha
Kupedza chingaitwa kicheni yenyu
Simba nzvimbo pamusoro upenyu kambani
Rosehip mafuta: kushanda uye zvivako. mafuta Rosehip nokuti ganda - wongororo
Nhoroondo yezororo Old New Year. Tsika, zviratidzo uye tsika Old New Year
Bhurukwa-kiinalaiset - yunifomu yechiuto mukushandira yevagari
Valset Apartments kubudikidza HELIOPARK, Russia: zvayakaita, tsananguro uye wongororo
Kurera - kutanga kuzvirovedza
Gore panguva US sehurumende. Hondo nokuti rusununguko zviri American dzaidzorwa uye United States dzidzo. The Constitution pamusoro 1787